भर्खरै आयो दुखद खबर: यी देश उड्न लागेका नेपालीहरु पनि रोकिने ! – Patrika Nepal
मंग्सिर १८, २०७८ शनिबार 112
काठमाडौं ; अस्ट्रेलियामा अझै केही दिने अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका खुला नहुने भएको छ । त्यहाँको यसअघि पर्सि (बुधबार)देखि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना खुला गर्ने बताएको थियो ।****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला*****
तर अब कम्तिमा पनि डिसेम्बर १५ सम्म अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्न पाउने छैनन् । अष्ट्रेलियन नागरिकहरुलाई नै भने सीमामा प्रवेश रोक लगाइने छैन ।
थप समाचार : इजरायलले विदेशी नागरिक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोरो’ना भा’इरसको नयाँ भेरिय’न्ट ‘ओमि’क्राेन’ को जोखि’मका कारण पूर्व’तयारी र रोकथामका लागि विदेशी नागरिक प्रवेशमा प्रति’बन्ध लगाएको इजरायल सरकारले जनाएको छ । उसले सबै नाकाहरु समेत बन्द गराउने भएको छ ।
नयाँ भेरि’यन्टको जो’खिमपछि अहिले विभिन्न देशले दक्षिण अफ्रिका र आसपासका देशबाट हुने उडान बन्द गरेका छन् । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया र युरोपेली युनियनअन्तर्गतका
देशले दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, जिम्बाबे, बोत्स्वाना, अङ्गोला, मालावी, जाम्बिया, लेसेथोबाट हुने उडान बन्द गरेका छन् । भारतले पनि दक्षिण अफ्रिका, बोत्स्वाना र हङकङबाट आउने यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
Prevडाक्टरले लिए दुई सन्तान र श्रीमतीको ज्या’न, ओमिक्रोनको डरले यस्तो गरेको खुलासा
Nextयिनै हुन साउदी अरबमा भएका नेपाली जसको यसरि मृत्यु भयो
कपालमा चाँया परेर दिक्क हुनुहुन्छ ? यस्तो छ हटाउने तरिका